किन फुल्छ कपाल ? कसरी बनाउने कालो ?
किन फुल्छ कपाल ? कसरी बनाउने कालो ?
के बृद्ध के बालक आजभोली सबैको कपाल फुल्न थालेको छ । एउटा निश्चित उमेरपछि कपाल फूल्नु स्वभाविक हो । यद्यपी अहिले कम उमेर वा किशोर अवस्थामै कपाल सेतो हुने समस्या देखिन थालेको छ ।
कपाल सेतो भएपछि त्यसलाई कालो बनाउन अनेक विधी अपनाइन्छ । धेरैले मेहेन्दी लगाउँछन् । यसले किशोरहरुको व्यक्तित्व विकासमा असर पर्छ ।
हाम्रो शरीरमा मेलानोसाइटिस सेल्स पाइन्छ, जसले कालो वर्ण निर्माण गर्छ र हाम्रो कपाललाई कालो बनाउँछ । अक्सर यो मेलनिनको उत्पादन उमेर बढेसँगै घट्दै जान्छ । त्यही कारण बुढ्यौलीमा कपालको कालोपन हराउँदै जान्छ । यस्तै, जब कुनै कारणवस मेलनिनको उत्पादनमा अवरोध आउँछ, हाम्रो कपाल असमयमै सेतो हुन्छ । अन्य कारणः
– मानसिक तनाव अर्थात डिप्रेसन
– मदिरा सेवन
– साइनस, थाइराइडको समस्या
– हर्मोनमा परिवर्तन
– पेटको गडबडी
– धुमपान, जर्दा गुट्खा आदिको सेवन
– केसको हेरचाह नगर्नु
– भोजनमा सहि पोषणको कमी
– एजिङ अर्थात बढ्दो उमेर
– जथाभावी हेयर प्रोडक्टको प्रयोग
कपाललाई कालो बनाउनका लागि केमिकलयुक्त हेयर कलर खोजिरहनुभएको छ भने त्यो हानिकारक हुनसक्छ । यसले क्षणिक रुपमा त समस्याबाट पार लगाउँछ तर, दीर्घकालिन रुपमा नराम्रो क्षति पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले कपाल कालो बनाउन यसो गर्नुहोस्ः
तोरीको तेलमा यस्तो गुण हुन्छ, जसले मेलनिनको उत्पादन बढाउँछ । यसले कपाललाई कालो बनाउन मद्दत गर्छ । साथै तोरीको तेलको पोषणले केस बलियो पनि हुन्छ ।
सेतो कपाललाई कालो बनाउन अमला निकै उपयोगी हुन्छ । यसमा रहेको एन्टि एजिङ गुण र पोषक तत्व जस्तो कि भिटामिन सि मेलनिन कम गर्ने कारकसँग लड्छ र त्यसको निर्माणमा सहयोग गर्छ । फलतः केस कालो र घना हुन्छ । साथै केस झर्ने, रुखो हुने समस्याबाट पनि छुटकारा दिलाउँछ ।
सुख्खा अमला पिसेर पाउडर बनाउने । त्यसलाई नरिवलको तेलसँग मिसाउने । उक्त मिश्रणले राती सुत्नुअघि कपाल मसाज गर्नुपर्छ । रातभर त्यतीकै छाडेर बिहान सफा पानीले पखाल्नुपर्छ । यदि अमलासँगै मेथी दाना पनि तताएर लगाइयो भने थप प्रभावकारी हुन्छ ।
नरिवलको तेल र कागती रस
नरिवलको तेल कपालको लागि बरदान हो । यसले कपाललाई मोश्चराइज राखेर रुखो हुन नदिने मात्र होइन, कपाल र्झनबाट समेत बचाउँछ । साथै नरिवल तेलले कपाललाई पोषण पनि दिन्छ । त्यतीमात्र होइन, नरिवलको तेलको नियमित प्रयोगले सेतो कपाल कालो हुन्छ ।
यता कागतीको रसमा भिटामिन बि, भिटामिन सि हुन्छ । दुई चम्चा नरिवल तेलमा कागतीको रस मिसाएर कपालमा मसाज गर्नुपर्छ । एक घण्टापछि कपाल धुनुपर्छ । यसलाई लगाएर घाममा भने बस्नु हुँदैन । नरिवल तेलको ठाउँमा बदामको तेल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सेतो कपालबाट मुक्ति पाउनका लागि एउटा सहज उपाय हो, प्याजको प्रयोग । प्याजमा यस्तो तत्व पाइन्छ, जसले कपाललाई सेतो बनाउने क्यास्टेल एन्टि अक्सिडेन्टको कमी हताएर कालो बनाइदिन्छ । प्याजलाई सलादको रुपमा सेवन गर्ने र त्यसको रस निकालेर कपालमा प्रयोग गर्नाले कपाल कालो हुन्छ ।
– ड्राइ फुड्स लगायत दुधजन्य परिकार, गाजर, फूल गोभी, तरबुजा, मेवा, सुन्तला सबै मिलाएर सेवन गर्नुपर्छ ।
– सि फुड्स, मासु, अन्डा, दुध सेवन गरौ ।
–एन्टि अक्सिडेन्टयुक्त खानेकुरा सेवन गरौ । ग्रीन टि, अंगुर, हरियो पत्तेदार सब्जी, फल आदि सेवन गरौ ।
– भिटामिन र मिनरल्स जस्ता भिटामिन बि १२, आइरन, कपर, आयोडिन आदिको कमी हुन दिनु हुँदैन ।
– घरेलु उपचारका साथसाथै पोषणयुक्त खानेकुरा पनि सेवन गरौ । किनभने पोषणको कमीले पनि कपाल फुल्छ ।